အမျိုးသမီးများအတွက် - အော်ဂဇင်ကသင့်ကို Hangover ပေးသလား။ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
2011 ခုနှစ်တွင်ဗြိတိန်သုတေသီများစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြန့်ချိ postcoital လက္ခဏာတွေစစ်တမ်း အမျိုးသမီးများအတွက်။ လိင်နှင့်အော်ဂဇင်များကအမျိုးသမီးများကိုတောက်ပနေသော၊ ကျေနပ်ရောင့်ရဲသောသတ္တဝါသို့မဟုတ်စိတ်အားထက်သန်သော၊ သုတေသီများမှတ်ချက်ချသည်
တိကျသောအင်တာနက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဖိုရမ်များမှသက်သေအထောက်အထားများစွာရှိသော်လည်းလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်စိတ်တို။ မရ၊ ငိုခြင်းနှင့်စိတ်အပြောင်းအလဲများသည်အမျိုးသမီးများနှင့်ယောက်ျားများတွင်အဖြစ်များလေ့ရှိသည်ဟုဆိုသော်လည်းယနေ့အထိမည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုမှဤဖြစ်စဉ်၏သဘောသဘာဝကိုလေ့လာရန်မကြိုးစားခဲ့ပါ။ အမျိုးသမီးဝေဒနာသည်များ၏အခြေအနေကိုဖော်ပြသည့်အစီရင်ခံစာများအရလိင်အင်္ဂါအရိပ်လက္ခဏာမပါဘဲနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် [ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်လက္ခဏာများ] ဖြစ်နိုင်သည်။
သုတေသနတွေ့ရှိချက်အရအမျိုးသမီး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်“ ကိုယ် ၀ တ္ထုလွန်ကာလစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ” သို့မဟုတ် PPS ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ၇.၇% တွင်ဤဖြစ်စဉ်သည်“ စွဲမြဲ” (နာတာရှည်) ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသုတေသီများလည်းကြောင်းထောက်ပြ
ဒါဟာသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုသိသိသာသာငွေပမာဏဒါအပေါ်ခံစားချက်, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်အပေါ်ဟော်မုန်း၏သက်သေသက်ရောက်မှုတည်ရှိစဉ်ကတည်းက postcoital နှင့် / သို့မဟုတ် postorgasmic endocrine ပွောငျးလဲ, အမျိုးသမီးများအတွက် PPS လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါမဖြစ်နိုင်မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်တော့ဒီလတစ်ဦး ဂျာမန်လေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု အော်ဂဇင်သွေးဆောင်နဲ့လိင်ဆက်ဆံထင်ရှား တစ်ဦးရှိနေဆဲဟုသံသရာ အမျိုးသမီးများတွင် (“ မှတ်ဉာဏ်” - ရေတိုအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ရေရှည် neuroendocrine တုံ့ပြန်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်) ။ ဤဟော်မုန်း (prolactin) မြင့်တက်မှုသည်ယူကေလေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြထားသောနာတာရှည်စိတ်ဓာတ်အပြောင်းအလဲများနောက်ကွယ်မှဒိုမီနိုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါမည်လော။
ယူကေသုတေသီများက“ မကြာသေးမီက” PPS သည်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသမိုင်းကဲ့သို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့်ဆက်နွယ်မှုမညီမျှမှု၊ ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့နှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၊ ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ဖိစီးမှုများသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ မျက်ရည်များနှင့်စိတ်တိုလွယ်မှုကိုတိုးပွားစေသည်ဟုသံသယမရှိပါ။
သို့သော်နာတာရှည် PPS ဝေဒနာသည်များအတွက်၊ ဆိုလိုသည်မှာဝေဒနာသည်အများစုသည်မကျေနပ်မှု - အလွဲသုံးစားမှုပုံစံကိုမကိုင်တွယ်ပါ -
မကြာသေးမီက PPS ၏ကှဲလှဲ၏ 70% ကိုစာရင်းကိုင်နေစဉ်, ဆက်ဆံရေးစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ယခင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်အလွဲသုံးစားမှုဖြစ်ရပ်များသာ persistent PPS အတွက်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ၏ 10% ကရှင်းပြသည် ... persistent PPS အထောက်အကူပြုသောအခြားအမည်မသိအချက်များရှိပါတယ်အကြံပြုသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှာတော့အဲဒါပါ ရှည်ကြာသော အလားအလာလူ့လိင်ကိုနားလည်ဘို့အရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်သဲလွန်စပူဇော်သူကို PPS ခံစားနေရသူ။ အသစ်ကဂျာမန်တွေ့ရှိချက်များအလငျး၌အမျိုးသမီးများသည်ဤ 7.7% ကောင်းစွာသူတို့တစ်တွေတွေ့ကြုံခံစားပုံကိုတစ်ဦးခေါင်းလောင်းကွေးတစျခုအဆုံးမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ် သဘာဝအ neuro-endocrine postorgasm / သုတ်ရည်ထိစက်ဘီးအီး (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ။ *
သံသရာအဆက်မပြတ်ဟော်မုန်းနှင့် neurotransmitters ၏အထပ်ထပ်ကျသွားအဆင့်ဆင့်မှတဆင့် homeostasis ပြုပြင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်။ တချို့ကသံသရာ (အိပ်ပျော်ခြင်း-နိုးထ, ရာသီသံသရာ) ပရိုဂရမ်နေကြသည်; အခြားသူတွေပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေများ (သွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့်, ရေအဆင့်ဆင့်) ကိုတုန့်ပြန်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
postcoital သံသရာသည်ရာသီလာခြင်းသံသရာကဲ့သို့ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများသည်ဆင်းရဲခြင်းမတိုင်မီပြင်းထန်သောရာသီမတိုင်မီရောဂါလက္ခဏာများ (PMS) ၏ postcoital counterpart အနေဖြင့်သာဖြစ်တတ်သည်။ PMS (တစ်ချိန်ကစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းအဖြစ်ထုတ်ပယ်ခံရခြင်း) သည်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ အမျိုးသမီးများ၏ 85 ရာခိုင်နှုန်းကို သူတို့ရဲ့လစဉ်သံသရာအတွင်းမှာ။ အချို့သာလျှင်5ရာခိုင်နှုန်းကပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာ (ယားယံခြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း, ရောင်ရမ်းခြင်း) ရှိသည်။ အခြားသူများကိုသူတို့ဟော်မုန်းဖြစ်ရပ်များ၏သိသိအဆငျ့ဆငျ့နှငျ့ပေါငျးမပြုစေခြင်းငှါအရာပျော့သက်ရောက်မှုခံစားရသည်။ တချို့ကလည်းအဘယ်သူမျှမလက္ခဏာတွေခံစားရသည်။
နောက်ကျော postcoital စိတ်ပျက်စရာ။ မျက်ရည်ယိုနေသောအမျိုးသမီးများသည်အခြားတစ်ဖက်၌လက္ခဏာများကင်းသောအမျိုးသမီးများနှင့်တစ်ခြားအဆုံးတွင်ရှိနိုင်မည်လော။ အလယ်အလတ်အမျိုးသမီးများသည်ပိုမိုပျော့ပျောင်းသောရောဂါလက္ခဏာများကိုလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိလျှင်ကော။ အချို့သောအမျိုးသမီးများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်အလွန်သိမ်မွေ့လွန်းပြီး၊ တစ်ဖက်ပေါ်သို့သူတို့ကိုပရောဂျက်နှင့်အပြစ်တင် သူ့ကို , နာကျင်ကျိန်းစပ်ထုံထိုပိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းစေ့စေ့နားထောင်ဖြစ်ခြင်းနည်း ဒါမှမဟုတ်တချို့အမျိုးသမီးတွေ neurochemical ဂယက်ထသောအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလျှင် နောက်ပိုင်းတွင် တိုးချဲ့လည်ပတ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ဆက်သွယ်မှုကိုအလွယ်တကူမလုပ်နိုင်သလား။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ postcoital စစ်တမ်းသည်၎င်းကဲ့သို့သောပထမဆုံးသောသုတေသနဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖြေများကိုမသိရှိကြပါ။ ဦး ဆောင်သုတေသီကသီးသန့်ပြောခဲ့သလို "ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်များစွာရှိသည်" သို့သော်ယခုပင်လျှင်, ဒီ postcoital သံသရာစဉ်အတွင်းစိတ်ဓာတ်အပြောင်းအလဲများကို (အကြံပေးခြင်းလိုအပ်သောပြissuesနာများကြောင့်) သို့မဟုတ် "ရောဂါဗေဒ" (ပုံမှန်မဟုတ်သော) အလိုအလျောက် "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ" ဖြစ်ကြောင်းယူဆရပ်တန့်ဖို့အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်သူတို့မကြာခဏဖြစ်နိုင်ခြေစဉ်းစား ဇီဝကမ္မ များစွာသောမိန်းမအတွက်ဿုံပုံမှန်သူတို့တစ်တွေ postcoital သံသရာနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ အကြောင်းမူကား, သူကတောင်သူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုကိုရှာကြံဖို့အခြားရွေးချယ်စရာချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောသံသရာကြောင့်ထိခိုက်စေခြင်းငှါထင်တဲ့သူမိန်းမတို့အဘို့အချိန်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ (အောက်တွင်ပို။ )
အော်ဂဇင် / လိင်ဆက်ဆံမှုပြီးနောက်တစ်ဦးက neuro-endocrine သံသရာ?
အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်ဤဖြစ်စဉ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ - ကြွက်များတွင်သန်စွမ်းသော“ intromission” (ဆိုလိုသည်မှာယောနိ၏လိင်အင်္ဂါကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း) သည်အနည်းဆုံးလိင်အင်္ဂါကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ နှစ်ကြိမ်-နေ့စဉ်အပွောငျးအလဲ၏ 10 ရက်ပေါင်း Multi-ရည်ရွယ်ချက်ဟော်မုန်း၏, prolactin, အနေဖြင့်အစပျိုး endocrine ဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် oxytocin ၏မြင့်တက် မိတ်ကပ်စဉ်အတွင်း။ (လူသားများအနေဖြင့်လည်းမိတ်လိုက်စဉ် oxytocin ကိုလွှတ်ပေးပါ။ ) ဤ postorgasm / copulation cycle သည်ကြွက်၏“ သန်စွမ်းသောလိင်” သည်ပconိသန္ဓေတည်စေခြင်းရှိ / မရှိအစပျိုးသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပျက်သနည်း? သုတေသီများ နှစ်ခုသီအိုရီရှိသည်:
ပထမဦးစွာ prolactin may dopamine sensitivity ကိုလြော့ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်အစီအစဉ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုသည်ယာယီကျဆင်းသွားခြင်း၊ Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု (ဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်မှလှုပ်ရှားမှု) ။ လူသားများတွင်ဤကဲ့သို့သောသိမ်မွေ့သောအာရုံကြောဓာတုဗေဒယိုယွင်းခြင်းသည်“ ယနေ့ညမဟုတ်၊ ချစ်မြတ်နိုးခြင်း” ကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်များသည် prolactin မြင့်တက်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုအတက်အကျများအကြားဆက်စပ်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်လူ့လေ့လာမှုများကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ prolactin မွေးဖွားခြင်းနှင့်သန္ဓေကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတဲ့အော်ဂဇင်-သွေးဆောင် neuro-endocrine မျိုးဆက်ပွားတုံ့ပြန်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ် (စ) တန်ခိုး surges ။ ဒါကကျန်းမာသန်စွမ်းသုတ်ရည်ထိကိုယ်ဝန်-ရှိမရှိအော်ဂဇင်ဖြစ်ပေါ်သို့မဟုတ်မ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့နိုင်ရန်အတွက်တိကျတဲ့ဟော်မုန်းတွေနဲ့သူ့ဟာသူထိန်းညှိဖို့ခန္ဓာကိုယ်များအတွက် cue ဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပါသည်။
တနည်းအားဖြင့် prolactin လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိကူညီပေးသောဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine စနစ်များကိုမှတုံ့ပြန်ချက်, နှင့် / သို့မဟုတ်ပါကမျိုးပွားအင်္ဂါကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ may ။
ဒီရှိနေဆဲဟု postorgasm / သုတ်ရည်ထိသံသရာလွန်းသောလူသားမြားဖွစျပါသလား? ဟုတ်ကဲ့! အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဂျာမန်သုတေသီတွေက မကြာသေးမီကလူ့အမျိုးသမီးလည်းအော်ဂဇင်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် prolactin အတွင်းသို့ရစ်သမ်အတွက်ရေရှည်အပြောင်းအလဲအတွက်ပြသသောသတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုပုံမှန်နေ့စဉ် prolactin အတက်အကျအပြင်၌တည်ရှိ၏။
အဆိုပါ postcoital စည်းချက်ပြောင်းလဲမှုသော prolactin မြင့်တက်အပြင်လည်းဖြစ်ပါတယ် ချက်ချင်းအော်ဂဇင်အောက်ပါအတိုင်း။ ဤသည်တစ်ဟုန်ထိုးအမှန်တကယ်သိသိသာသာအတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဖြစ်ပေါ် အမျိုးသမီးအတွက်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်။ သုတေသီများကပြီးတော့အချိန်အဘို့မိမိတို့ prolactin Secret ပုံစံများပွောငျးလဲသော prolactin-dopamine-oxytocin ချိန်ခွင်လျှာ, နှောင့်အယှက်ကြောင့် hypothesize ။ ဒါဟာအခြားသူများထက်အချို့သောအမျိုးသမီးများကိုပိုမိုဒီချိန်ခွင်လျှာနှောင့်အယှက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤလေ့လာမှုသည်လူသားများတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောသံသရာ၏ပထမဆုံး endocrine အထောက်အထားဖြစ်သည်။ သုတေသီများသည်၎င်းကိုယခုအချိန်အထိရှာဖွေခြင်းမရှိသေးပါ။ အကယ်၍ ဤသံသရာကိုလူ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင်ထိန်းသိမ်းထားပါကအဘယ်အလားတူမမြင်နိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သနည်း။
အမျိုးသမီးတွေဘာလိုချင်တာလဲ တစ် ဦး ရှုပ်ထွေး Freud မေးတယ်
ကြွက်များတွင်အနည်းဆုံး (၁၀) ရက်ခန့် PPC ရှိကြောင်းဖော်ပြထားသောကြောင့်လူသားများတွင်မည်မျှကြာမည်နည်း။ စမ်းသပ်လေ့လာမှုတွင် prolactin ပမာဏကို ၃၂ နာရီသာတိုင်းတာသည်။ postcoital မြင့်တက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသံသရာ၏တစ် ဦး တည်းသာရှုထောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ ထိုကဲ့သို့သော endocrine "အမှတ်တရများ", မည်မျှအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနှင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘယ်လောက်အတွက်မှာအားလုံးလျှင်စိတ်ဓါတ်များနှင့်အမြင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်နည်း ဘယ် neurochemical / hormonal dominos တွေကဘယ်လက္ခဏာတွေနဲ့ကိုက်ညီသလဲ။ သင်ယူစရာများစွာရှိပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုလျော့ပါးစေသည့်အာရုံကြော - endocrine ယန္တရားသည်သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်အမျိုးသမီးများ၏အမြင်ကိုယာယီပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ သူမသည်အာရုံကြောဓာတုဗေဒဟန်ချက်ညီနေချိန်အတွင်းသူမနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုကျေနပ်အားရမှုနည်းသည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏စိတ်အားထက်သန်စွာကြိုတင်ဟောကြားချက်သည်ယခုသီတင်းပတ်အတွင်းကြယ်တစ်လုံးသာရနိုင်သည်၊
ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီးပုံသဏ္randomာန်ကျကျထင်မြင်နိုင်သည့်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်ခိုင်လုံသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်မရှိပါကမိတ်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ကျဆင်းသွားပြီလားဟုတွေးမိနိုင်သည်။ postcoital သံသရာအတည်ပြုပြီးဘုံအသိပညာခဲ့ကြသည်ဆိုပါက, အိမ်ထောင်ဖက်သူတို့အလိုဆန္ဒများကိုအမီလိုက်ရန်သူတို့၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဇီဝကမ္မဗေဒကိုစောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာလက်ခံနိုင်ဘူး။
Prolactin ကိုလည်း dopamine level များကိုနှိမ်နင်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက် neuro-endocrine သံသရာသည်အမျိုးသမီး၏လိင်စိတ်ကိုသာမကသူမ၏စိတ်နှင့်စွမ်းအင်အဆင့်ကိုပါဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ (Dopamine သည်အာရုံကြောဓာတုဗေဒပညာရှင်တစ် ဦး သာဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်မှု၊ အကောင်းမြင်မှုနှင့်သာယာဝပြောမှုတို့ကိုခံစားစေသည်။ )
အောက်ခြေလိုင်းတစ် postcoital neuro-endocrine ဒီရေဆန့်ကျင်ရုန်းကန်နေကြသူအမြိုးသမီးမြား၏အိမ်ထောင်ဖက်တစ်နည်းနည်းအဘို့ကိုနှစ်သက်ဖို့သူတို့ရဲ့မင်းသမီးကအရမ်းခက်ခဲတွေ့ပါစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ (PMS စဉ်းစားပါ။ ) ဝမ်းသာစရာထပ်တူပြုခြင်းထဲကနေသောမိတ်ဆွေတို့ကိုနေဆဲ soothing နေ့စဉ်အလုပ်သမားထံမှအကြိုးပွုနိုငျ Bond အပြုအမူတွေ။ စုံတွဲများနှင့်အာဟာရအပန်းဖြေတုံ့ပြန်မှုအားပေးအကြားဤအတိုးယုံကြည်မှုကို။
သမိုင်းဆိုင်ရာ lovemaking ဆေးညွှန်း
ကမ္ဘာအဝှမ်းမှယောဂီလောင်းချိန်ခွင်လျှာအတွက်မိတ်ဆွေတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏သမဂ္ဂများ၏သဟဇာတရေရှည်တည်တံ့ဖို့နည်းစနစ်အကြံပြုဘာလို့တစ်ဦး postorgasm / သုတ်ရည်ထိသံသရာ (ကျုံ့သွားစေပါတယ်) ၏တည်ရှိမှုကိုရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, ဂန္ဥရောပအနုပညာရှင်တွေမကြာခဏမတ်ေတာ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်စစ်ဆေးမှုများအတွက်တိုက်စားမှုစောင့်ရှောက်ရန်တိုက်စားမှု-အရိပ်ကိုလိုအပ်ကြောင်းများ၏မြှားကိုသိုထားသောကာမဂုဏ်အချစ်နဲ့၏ဆောင်ပုဒ်ခြယ်။
ကိုရှာလိင်သည် ပို၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြစ်သည်။ ဒါဟာသီးခြားအိပ်ရာများတွင်တစ်လနှစ်ပတ်နီးပါးသတ်မှတ်။ ဤစစ်တမ်းကောက်ယူမှုသည်အများအားဖြင့်ကလေးမွေးဖွားချိန်တွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏လက်တွဲဖော်ကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း၎င်းသည် libido နှင့်စွမ်းအင်အဆင့်များကို homeostasis သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန်လည်းအချိန်ပေးလိမ့်မည်။
Daoist dual-စိုက်ပျိုးမှုအဖြစ်ကောင်းစွာလိင်တစ်ဦးထိန်းချုပ်ထားချဉ်းကပ်အကြံပြု, မပါဘဲ ခြားနားရက်သတ္တပတ်။ ရှေးခေတ်တရုတ် စုနု၏ဂန္ ပြည်နယ်များ, "တဦးတည်း Self-ထိန်းချုပ်မှုကိုကျင့်သုံးခြင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်အေးဆေး ... ထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲလိင်များတွင်ပါဝင်နေသည်ဆိုပါက, ခစျြအမှန်တကယ်တိုးပွားစေပါသည်။ " နှစ်ဦးစလုံး karezza နှင့်မိက္ခေလနှင့် ဒိုင်ယာနာရစ်ချတ်ဆင်၏ tantra ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုတစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်မဟုတ်ဘဲမကြာခဏထှတျအထိပျထကျ, မကြာခဏ, နူးညံ့သိမ်မွေ့လိင်ဆက်ဆံမှုတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထားထားပါ။
ကျန်းမာသန်စွမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွနဲ့အထွတ်အထိပ်သူ့ဟာသူမှာဟော်မုန်းမြင့်တက်: ထိုသို့သောစိတ်အေးလက်အေးချဉ်းကပ်ပုံကိုသူတို့တိုးချဲ့ prolactin များအတွက်လူသိများအစပျိုးခြင်းသုတေသီများတွေ့ surges နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဝှမ်း tiptoe ကြောင်းပေးထား, ကောင်းသောဇီဝအသိပါစေ။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသသော်လည်း၎င်းသည် PCC ၏ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားနာခဲ့ရကြောင်းသတိပြုသင့်သည် အဲဒီအကြောင်းရေးသားခြင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ။ ဤတွင်ဖိုရမ်လဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
က Man: ကျွန်တော့်ဇနီးကယ့်ကိုကြီးမြတ်လိင်၏တညဉ့်ပြီးနောက်နံနက်အခါသမယအပေါ်အဓိကခွေးသို့လှည့်။ ငါမျိုးစုံ orgasm နှင့် 2-3 နာရီ session ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ နောက်နံနက်ငါ Anti-ခရစ်တော်ဖြစ်၏!
အမျိုးသမီး: ဒါကလည်းငါ့ကိုအဖြစ်ပျက်! ငါသည်ငါ၏ချစ်လှစွာသောခင်ပွန်းနှင့်အတူတစ်ဦးအကြီးညဥ့်ပြီးနောက်နံနက်ယံ၌ထနိုးနှင့်တခါတရံတွင်ငရဲကနေခွေးနဲ့တူခံစားကြရသည်။ ။ ။ တကယ်စိတ်တိုခြင်းနှင့်သုန်မှုန်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ငါကောင်မလေးတစ်ယောက်တစ်ဦးကအလွန်ပင်-Keel မျိုးပေါ့။ အမှုအရာ orgasm ပိုမိုပြန့်နှံ့နေကြတယ်ပိုကောင်းလာသောအခါခံစားရသည်။ ယင်း "အို" ဟုစဉ်ဆက်မပြတ်, ပုံမှန်အခါကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ၏အဆွဲဆောင်နှင့်ငါ့အိမ်ထောင်ဖက်ဆီသို့နွေး fuzzy ခံစားချက်များကိုတစ်ဦးသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းသတိပြုမိပါပွီ။
အစဉ်မပြတ်ငါတစ်ဦးအလွန်ကာမဂုဏ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ငါတစ်ခုတည်းတှေ့ဆုံအတွက်ငါးအဖြစ်အများအပြားကိုးအဖြစ် orgasm ရှိနိုငျတယျ။ ထိုနောက်မှငါသည်မကြာခဏမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးရင်ခုန်စရာ, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မတ်ေတာရှိသောလဲလှယ်သခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပွီးလြှငျထက်ငါ့အဖက်သိမ်းပိုက်ပြီးလျှင်တစ်အသိခံစားရတယ်။ ငါများသောအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှုသူ့ထံမှဝေးကွာသောခံစားမိ; ငါရီစရာပါဝါဂိမ်းကစား, ဒါမှမဟုတ်တခြားရုံကိုချွတ်သွားနှင့်စျေးကြီးအဝတ်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာအပေါ်တစ်ဦးကံဇာတာဖြုန်း, ငါသည်ဤကွီးစှာသောကောင်လေးနှင့်အတူတူငါနှင့်အတူအပေါငျးတို့သညျငါ၏ finery အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုဖြစ်ချင်ပါတယ်ဘယ်မှာအတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့အံ့သြစရာလူမှုရေးဘဝအကြောင်းကိုကူးယဉျလိမ့်မယ်။
ရက်အတွင်းငါ weepy ဖြစ်လာချင်ပါတယ်နှင့်ငါ့ဘဝအတွက်အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ကာလအကြောင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ပြီးပျော့စိတ်ကျရောဂါသို့ကျလိမ့်မည်။ ငါကောင်လေးပစ္စုပ္ပန်နှင့်အတူဤအမှုကိုပြုလျှင်, ငါသူ့ကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့လက်ျာဘက်အရာလို့ပြောနှင့်နာကျင်မှုသက်သာလိုကာကွယ်ပေးတဲ့လူကိုရလိမ့်မည်။ သို့သော်ယောက်ျားငါ့အစိတ်ပျက်လက်ပျက်၏အတိမ်အနက်ကိုအဘို့အညာဘက်အရာသို့မဟုတ်မကြာခဏအလုံအလောက်မဆိုသလိုပဲဘယ်တော့မှမ။ ထိုအခါယောက်ျားတစ်ယောက်လျှက်-လွန်းဖို့အားနည်းခြင်းနှင့်ပင်ပန်းခြင်းနှင့်စိတ်မချရတက်မလာဘဲ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးသည်ယခုအခါ-ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်တောင်းဆိုနေတာအမျိုးသမီးတစ်ဦး-I'd ၏ယိုစီးမှုမှလွတ်မြောက်ရန်လာမည့်သိမျးပိုကျဖို့ချွတ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရသောအခါ, ငါ့စျေးကြီးဝယ်ယူမှုနှင့်အတူကျန်ခဲ့လိမ့်နဲ့ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းဥပဒေကြမ်းပေးဆောင်နိုင်ဘူး။
စမ်းသပ်စတင်ခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးကခင်ပွန်းဖြစ်သူ karezza, အံ့သြအစီရင်ခံသည်မိမိမယားအကြောင်း,
အော်ဂဇင်လက်လွတ်နှင့်မဆိုပိုရှိသည်ရန်မလိုသောဆန္ဒရှိတယ်မထားဘူး။ သူမကအတိတ်ကာလအလွန်အစွမ်းထက် orgasm ခဲ့သကဲ့သို့ငါ, ထိုအကြောင်းကိုမေးတယ်။ ငါ့အဘို့, သူတို့ကတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ဖို့အတော်လေးပျော်စရာခဲ့ကြသည်! ကျွန်မသူမဒါအားကောင်း orgasm ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုမေးသော်, ဒါပေမယ့်တော့ဘူးသူတို့ကိုမလိုချင်။ သူမသည်သူတို့နောက်မှနေ့ရက်ကာလအဘို့အထဲကသုတ်သူမ၏ left ဟု, ငါသိတယ်ဘယ်တော့မှမ။ သူမသည်အော်ဂဇင်မယ့်သူ့အဘို့ကျိုးနပ်မရကပြောပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏အော်ဂဇင်သည်နည်းလမ်းများစွာတွင်အဖိုးတန်။ သူထံမှလှပသောချစ်ခြင်းမေတ္တာလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝနောင်တမရခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့မကြာခင်မှာပဲငါလမ်းလျှောက်လာတဲ့အခါခြေထောက်တွေကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ ငါ့ခြေလှမ်းအတွက်တုန်သွားပြီ။ ကျွန်မရဲ့အတွေးတွေလည်းမရှင်းတော့ဘူး၊ ပူပြင်းတဲ့ဒယ်အိုးတစ်ခုမှားယွင်းနေတာကိုလက်ညှိုးအနည်းငယ်မီးရှို့ပြီး။ ငါတို့တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အလွန်ချစ်ပါတယ်၊ အမြဲတမ်းရှိသည် - သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်သံသရာများကိုဖြတ်သန်းသွားခဲ့ကြပြီးအမှန်ကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ [ဒီသံသရာကိုသိရှိထားခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ်] ရှုထောင့်အသစ်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရပြီးပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကအလွယ်တကူအပျက်သဘောမတုံ့ပြန်ဘူး
"ကာရာဇာနူထတ်" အမျိုးသမီးတစ် ဦး က
အာရုံကြောဓာတုနာမကျန်းဖြစ်မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ ငါကမဖြစ်နိုင်ဘူးသေချာတယ်! ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြtheနာရဲ့အရင်းအမြစ်အဖြစ်ရှုမြင်ဖို့လအတော်ကြာတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကကျွန်တော့်ကိုအရမ်းစိတ်ရှည်ခဲ့တယ်၊ သူကကျွန်တော့်ကိုစူးစူးဝါးဝါးဝါးဝါးဝါးနဲ့စည်းရုံးနိုင်ပေမယ့်ရန်ပွဲတစ်ခုမှာမပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ငါအော်ဂဇင်တင်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ဝေဖန်ခံရပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်။ ငါကပိုပြီးအထီးကျန်ပြီးနားလည်မှုလွဲတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါအိပ်ရာ၏ဝေးဘက်ခြမ်းသို့ရွှေ့ပေမယ့်အနည်းငယ်အဘို့အကြှနျုပျ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပြစ်တင်လိမ့်မယ်။
ငါတို့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာကအဝတ်အချည်းစည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှောင်ခိုတင်သွင်းခြင်းကိုနေ့တိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပဲ။ ငါဟာလိင်ကိစ္စအမြင့်ဆုံးမောင်းနှင်အားကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ နေ့စဉ်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းမပါဘဲငါဟာမစင်ကိုအရမ်းပူစေပြီးမကြာခဏအိုဂျင့်ကိုအဆုံးသတ်စေလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာနည်းနည်းလေးသောရုတ်တရက်မှာဆူနာမီဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ postcoital ဂယက်ထတဲ့သူပဲ။
ငါ့အဖက်နဲ့ကျွန်မ 18 months ago အကြောင်းကိုဒီလမ်းကြောင်းကိုဆင်းစတင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကငါတစ်စုံတစ်ဦးကိုဘယ်လိုပျော်ရွှင်ကျနော်တို့အကြောင်းကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ခဲ့ အခုသလိုပဲ အမြဲတမ်းပြုံးရယ်အတူတကွရယ်မော။ ဒါအမှန်ပဲ။ ကျနော်တို့အငြင်းအခုံခဲ့နောက်ဆုံးသောကာလကိုမအောက်မေ့နိုင်ပါ။ ငါလုပ်သင့်သောအရာသည်နေ့စဉ်စိတ်ဓာတ်ရေးရာဂျာနယ်တစ်ခုထားရှိရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ခုခုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အရာများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့် karezza မည်မျှကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပုံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာစေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့လိင်ဆက်ဆံမှု, အော်ဂဇင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းမရှိဘဲ, ကောင်းစွာသာယာဝပြောရေးသူမ၏အသိတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေခြင်းငှါနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတှကျသတိစမ်းသပ်မှုမရှိရင်ဒါဟာခက်ခဲတဲ့နိုင်ပါတယ်။ သူကသူမ၏မဆို sneaky postorgasm / သုတ်ရည်ထိသံသရာတာတွေကိုခွင့်ပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တဖန်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာချဉ်းကပ်မှုအလုပ်မလုပ်ပေမည်။
မျှော်လင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလျင်မြန်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်အသိအမှတ်ပြုမဆိုကျုံ့သွားစေပါတယ်အဖြစ်သက်ရောက်မှု၎င်း၏အပြည့်အဝအကွာအဝေးပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ပိုပြီးအော်ဂဇင်, မျိုးစုံ orgasm နှင့်မိန်းမတို့အဘို့ ejaculatory orgasm များ၏အရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးအကျိုးကျေးဇူးအတွက်လက်ရှိယုံကြည်ချက် rethinking ဆိုလိုပေမည်။ ဒါဟာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ဒဏ်ငွေ-ညှိလေးစားရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် စုံတွဲများ နှင့် တစ်ဦးချင်းစီ.
အနာဂတ်ပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယောက်ျားများတွင် postorgasm / copulation cycle ရှိနေကြောင်းသိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများကိုလေ့လာပါမည်။ ဤအတောအတွင်း၊ လူကြီးလူကောင်းများ၊ သင်နှင့်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်စည်းညှိနေခြင်းမှထွက်ခွာသွားသောအခါအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနေပါ။ သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်မည်မျှပင်ကျွမ်းကျင်ပါစေသင်၏ချစ်သူရည်းစားအားပုံမှန်အတိုင်းစွမ်းအင်၊ ချစ်ခင်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောဟာသဉာဏ်သို့မရောက်မီရိုးရိုးရှင်းရှင်းအာရုံကြော - endocrine အနက်ရောင်အပေါက်ကိုဖြည့်ရန်မျှော်လင့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဝေါဟာရများအပေါ် * မှတ်ချက်: အစဉ်အလာ, ဟော်မုန်း ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့် neurotransmitters ဦးနှောက်အတွက်, ဒါပေမယ့်တဖြည်းဖြည်းသိပ္ပံပညာရှင်များအများအပြားဟော်မုန်းနှင့် neurotransmitters နှစ်ဦးစလုံးဦးနှောက်ထဲမှာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိ နှင့် အရံကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ။